चिया पसलदेखि तरकारी बजारसम्म जताततै सेयरै-सेयर! :: कमल नेपाल :: Setopati
५० दिनमै खोले ३ लाखले डिम्याट खाता
‘तपाईंले भर्नुभो त त्यो बैंकको सेयर?’
‘अँ मेरो छोरोले बुढाको, आफ्नो र मेरो हिजो भर्दिएछ।’
नयाँ बानेश्वर चोकमा तरकारी बेच्न बसेका पवित्रा र बिना भुसाल शनिबार इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको आइपिओबारे कुरा गर्दै थिए।
सिन्धुपाल्चोकका पवित्रा र बिना करिब ४ वर्षदेखि साँझपख नयाँ बानेश्वर चोकमा तरकारी बेच्दै आएका छन्। उनीहरूले अरूसँग मिलेर गाडीमा तरकारी ल्याउँछन्, साँझपख चाेककाे सडकपेटीमा बसेर बेच्छन्।
आजकाल उनीहरूले प्राथमिक सेयर (आइपिओ) भर्न थालेका छन्।
उनीहरूको गफ सुनेपछि तरकारी जोख्दै मैले सोधें, ‘दिदीहरुले पनि सेयर भर्ने गर्नुहुन्छ?’
पवित्राले भनिन् ‘छोरोले भर्दिने गरेको छ, भरेर पर्‍यो भने पछि बेच्दा फाइदा हुने रैछ।’
उनी सेयर बजारबारे धेरै जान्दिनन्, तर छोराले यसअघि अजोड इन्स्योरेन्सको १० कित्ता सेयर पारेका रहेछन्, १ हजार रुपैयाँ परेको त्यो सेयर साढे ६ हजारमा बेचेको सुनेपछि उनको पनि रुची बढेको छ।
त्यसपछि छोराले आफ्नोमात्रै नभई बुवाआमाको पनि डिम्याट खाता खोलिदिएर सेयर भर्दिने गरेका रहेछन्।
‘सबै छोराले नै गर्छ, पछि बेचेपछि मात्रै नाफा भएकोबारे मलाई भन्छ’ पवित्राले भनिन्।
सेयर खुलेपछि छोरालाई भरे, नभरेको, परे, नपरेकोबारे सोध्ने/बुझ्ने गर्छिन्।
‘धेरै कुरा त थाहा छैन, तर अब अर्को सेयर कहिले खुल्छ, कति पर्‍यो, कतिमा बेच्यो, कति फाइदा भयो भनेर सोध्ने गर्छु’ उनले भनिन्।
उनले नै भनेपछि बिनाले पनि सेयर भर्ने गरेकी रहेछिन्। किराना पसल चलाउने बिनाका श्रीमानले छोरीसहित तीन जनाको सेयर भरिदिने गरेका छन्।
आजकाल बिना र पवित्राबीच सेयर भरे/नपरेको, परे/नपरेको, फेरि खुल्न लागे/नलागेको बारे कुराकानी हुन्छ।
तरकारी बजारमा मात्रै होइन, हिजोआज चिया पसलमा समेत सेयरका गफ हुने गरेका छन्। धेरै जानकार भएकाहरू दोस्रो बजारको उतारचढावबारे कुराकानी गर्छन्। अहिले सेयर बजार हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा छ।
बजारको अंक कतिसम्म पुग्ला? घट्न, बढ्नका लागि के के आधार छन्? कुन कुन कम्पनीको अवस्था कस्तो छ? कुन कुन कम्पनीले कस्तो वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरे? कुन कुन कम्पनीको लाभांश, बोनस आयो? जस्ता विषयमा चिया पसलमा चर्चा हुने गरेको छ।
पछिल्लो समय सेयरबारे धेरै नै चर्चा हुन थालेको स्वंय लगानीकर्ता बताउँछन्। लगानीकर्ता पिताम्बर शर्मा खरेल भन्छन् ‘हो, हिजोआज मैले पनि सेयरको गफ बढी नै सुन्ने गरेको छु, साथीहरूसँग यसो जमघट हुँदा हाम्रो गफ पनि यसमै केन्द्रित हुन्छ।’
परिसूचकभन्दा पनि आजकाल कम्पनीका विवरणबारे नै टीकाटिप्पणी हुने गरेको उनी बताउँछन्।
आफ्नो घरमा बस्ने केही दिदीबहिनीले समेत डिम्याट खाता खोलेर सेयर भर्न थालेको उनले बताए। अहिले सामान्य लेखपढ गर्न जान्नेहरू पनि प्राथमिक सेयर बजारमा आएको खरेल बताउँछन्।
‘प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँमा पाइने प्राथमिक सेयर भर्दा नोक्सान हुँदैन, बरू फाइदा नै हुन्छ भन्ने मानसिकता बनिसकेको छ’ उनले भने।
पछिल्लो समय एकले अर्कोलाई सेयरबाट फाइदा हुन्छ भनेर प्रचार गर्दा पनि अहिले यसप्रति आकर्षण बढेको उनी बताउँछन्।
अर्कोतर्फ विभिन्न अनलाइन समाचार माध्यममा सेयरका समाचारले प्राथिमकता पाउँदा पनि युवा पुस्तामा आकर्षण बढेको उनको भनाइ छ।
‘हाल धेरै कम्पनीको आइपिओ खुलिरहेका कारण समाचार हेर्दा पनि त्यही देखिन्छ, कति जनालाई पर्‍यो, कति फाइदा लिए जस्ता समाचारले धेरैको ध्यान खिचेको हुन्छ, फाइदा देखेपछि स्वभाविक रूपमा मन तानिन्छ,’ उनले भने।
सेयर बजारमा लाग्नेको संख्या बढेको कुरालाई तथ्याङ्कले पुष्टि गर्छ। प्राथमिक सेयर भर्नका लागि डिम्याट खाता अनिवार्य चाहिन्छ। डिम्याट खाता खोल्नेको संख्या पछिल्लो समय ह्वात्तै बढेको छ।
सिडिएससीका अनुसार डिम्याट खाता खोल्नेको संख्या २६ लाख १८ हजार ६२८ पुगेको छ। जबकी मंसिर १६ गतेसम्म २२ लाख ९९ हजार थियो। ५० दिनमै ३ लाखभन्दा बढीले डिम्याट खाता खोलेका छन्।
सिडिएस एण्ड क्लियरिङका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले भने, ‘बजार बढेपछि हल्लाखल्ला बढी हुन्छ, नयाँ लगानीकर्ता पनि थपिन्छन्, हाल नयाँ बीमा कम्पनीसहित धेरैको आइपिओ पनि आइरहेको छ, यसले पनि डिम्याट खाता खोल्नेको संख्या बढेको हो।’
कतिपयले प्राथमिक सेयर भर्नकै लागि पनि डिम्याट खाता खोल्ने गरेका छन्। धितोपत्र बाँडफाँड निर्देशिकाले समेत प्राथमिक बजारमा संख्या बढाउनलाई टेवा पुर्‍याएको छ। निर्देशिकाअनुसार पुगेसम्म सबैलाई १० कित्ताका दरले प्राथमिक सेयर बाँडफाँड गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
धेरैजसो कम्पनीको सेयर हाल १० कित्ताका दरले पनि बाँडफाँड गर्न पुग्दैन। यसअघि खुलेका प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स, सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स, चन्द्रागिरि हिल्स लगायत दर्जनौं कम्पनीका आइपिओमा परेका आवेदनले यही पुष्टि गर्छ।
त्यस्ता कम्पनीमा गोलाप्रथाबाट १ सय कित्ताका लागि आवेदन दिनेले पनि १० नै पाउने हो भने १० का लागि आवेदन दिनेले पनि १० नै पाउने हो।
जसले गर्दा धेरैजसो अभिभावकले आफ्नो नाममा मात्रै भन्दा पनि परिवारका सबै सदस्यलाई आवद्ध गराउँछन्। एक्लैले भर्नुभन्दा धेरैले भर्दा पर्ने सम्भावना बढी हुन्छ। यसले गर्दा पनि पारिवारिक रूपमा सेयरबारे छलफल हुन्छ।
बालबालिकाको समेत अभिभावकले डिम्याट खाता खोलेर सेयर भरिदिन पाउने व्यवस्था छ। १८ वर्ष नपुगे पनि डिम्याट खाता खोल्न मिल्छ। सिडिएससीका अनुसार ३ लाख बढी बालबालिकाको डिम्याट खाता खुलेको छ।
डिम्याट खाता खोल्नेको संख्या उच्च रहे पनि दोस्रो बजारमा कारोबार गर्नेहरुको संख्या भने कम छ। नेप्सेका अनुसार दोस्रो बजारमा कारोबार गर्नेको संख्या ४ लाखको हाराहारीमा छ। तीमध्ये २ लाख ५६ हजारले दोस्रो बजारमा अनलाइनबाटै कारोबार गर्छन्।
प्राथमिक बजारमा संख्या बढेसँगै स्वभाविक रूपमा दोस्रो बजारमा पनि बढ्न जाने लगानीकर्ता बताउँछन्।
खरेल भन्छन् ‘प्राथमिक बजारमा परेको सेयर बिक्री गर्ने भनेकै दोस्रो बजारबाट हो, त्यसकारण क्रमिक रूपमा दोस्रो बजारमा संख्या बढ्दै जानेछ।’
प्रकाशित मिति: बिहीबार, माघ ८, २०७७, २३:०९:००